जापानी उपनिवेशबाट प्रताडित कोरिया सन् १९४५ मा एउटा सार्वभौम गणतान्त्रिक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा भने जहानियाँ राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन सुषुप्त रूपमा चल्दै थियो । कोरिया स्वतन्त्र भएपछिको ठीक ५ वर्षपछि कोरियन युद्ध शुरु भयो । जुन युद्ध करिव ३ वर्षसम्म चल्यो । सन् १९५३ मा उत्तर कोरियाको जन्म सहित उक्त युद्ध टुंगियो । कोरियाको भूगोल दुई स्वतन्त्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियामा विभक्त भयो ।
विकासको बाटोमा दुवै राष्ट्रहरु आ—आफ्नै मौलिकतामा अघि बढेको पाइन्छ । आजको सन्दर्भ दक्षिण कोरियाको दु्रत आर्थिक विकासका बारेमा रहेको छ । कोरियालीहरुका अनुसार आजभन्दा करीब ६० वर्ष अगाडि कोरिया हरेक किसिमले ध्वस्त थियो । कोरिया एउटा आशाविहीन मुलुकको रूपमा चित्रित थियो । जापानी उपनिवेशवादको ताजा उन्मुक्ति र कोरियन युद्धका कारण दक्षिण कोरियासँग विकासका पूर्वाधार र साधन श्रोतको पूर्णतया अभाव थियो । अर्थतन्त्र जर्जर थियो भने सबै कुरा वैदेशिक सहायतामाथि निर्भर थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले दक्षिण कोरिया १७२ देशहरुमध्ये १७२ औं स्थानमा रहेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा आन्तरिक द्वन्द्व, गरीबी र पलायनता कोरियाली नागरिकका लागि अनिवार्य नियति जस्तै देखिन्थे ।
यस्तै जर्जर राष्ट्रिय परिस्थितिको बीचबाट दक्षिण कोरियाले खासगरी सन् १९६२ देखि रणनैतिक रूपमा आर्थिक विकास योजनाको सुरुआत गरेको थियो । स्मरणरहोस् नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि २०१३ साल (सन् १९५६) देखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो र त्यसले विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी दक्षिण कोरिया भन्दा अघि भएको पाइन्छ तापनि नेपाल अझै अति अल्पविकसित मुलुकको कोटिमा छ भने कोरिया छोटो समयमै एउटा विकसित आधुनिक एवं औद्योगिक राष्ट्रमा रूपान्तरण भैसकेको छ ।
दक्षिण कोरिया अहिले संसारको एउटा यस्तो राष्ट्र सावित भएको छ जहाँ छोटै अवधिमा ठूलो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको छ । समग्र विकासका हिसाबले एउटै पिढीको जीवनकालभित्र दक्षिण कोरियामा पूर्ण रुपान्तरण संभव भएको अवस्था छ । अहिले आर्थिक रुपले निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित दक्षिण कोरियाको जर्जर अर्थतन्त्र अहिले समृद्ध औद्योगिक अर्थतन्त्रमा परिणत भैसकेको छ । सामाजिक रुपमा अति विपन्न र दुर्गम ग्रामीण अवस्थामा रहेको समाज अहिले पूर्वरुपमा शहरी समाजमा रुपान्तरण भएको छ । प्राविधिक रुपमा अर्ध–ढुंगे युगमा रहेको राष्ट्र अहिले अन्तरिक्ष युगमा पुगिसकेको छ । राजनैतिक रुपमा दक्षिण कोरिया औपनिवेशिक शासन र सैनिक शासन भोगाइसंगै अहिले एउटा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा सफलतापूर्वक रुपान्तरण भैसकेको छ ।
सन् १६६० अघि कोरियालाई एउटा पूर्णरुपमा असफल राष्ट्रको रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो । देशभित्र विकासका लागि अत्यावश्यक प्राकृतिक साधन श्रोत, सीप र पूँजीको उपलब्धता थिएन । त्यतिबेला कोरियासंग एउटै कुरा मात्र थियो । त्यो भनेको धेरै मात्रामा गरिव जनताको संख्या । जापानको औपनिवेशिक शासन र कोरिया युद्धले करीव २० लाख मानिसले आफ्नो जीवन गुमाइसकेका थिए भने करीव ६० लाख मानिसहरु आफ्नो घाइते जीवन बाँच्दै आफ्नो र कोरियाको भविष्य खोज्दै थिए । अझ अमेरिका तथा ब्रिटेन जस्ता देशहरुले तत्कालीन अवस्थामा कोरियालाई “ईश्वरले पनि छाडेको, त्यागेको देश” भनेर गिल्ली गर्दथे । गरीब एवं घाइते कोरियाली जनता गहिरो विस्मृतिमा थिए, कुनै आशा थिएन, कुनै भविष्य थिएन । यसरी शुरुको अवस्थामा हेर्दा औपनिवेशिक शासन र युद्धबाट ग्रस्त कोरियामा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिरताको अभाव टड्कारो रुपमा थियो भने जनतामा चरम नकारात्मक भावनाको विकास भएको थियो । अत्यधिक गरिवी, खाद्यान्न अभाव हुँदा जनताको जीवन निर्वाह समेत वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहन्थ्यो । सन् १९६० सम्म प्रति व्यक्ति आय ७९ अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो । कोरियाले आफूलाई यस्तो जर्जर अवस्थाबाट कसरी मुक्त गर्न सक्यो होला ? निश्चय पनि यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो विकासमा पछौटेपनको लागि एउटा पे्ररणादायी सन्दर्भ सावित हुनसक्दछ । अहिले हामी राजनैतिक संक्रमणको अवस्थामा रहेतापनि दक्षिण कोरियाले छोटो समयमै गरेको विकासको यो “सफलताको कथा” बाट हामी धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं ।
राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुपको विशेष एबं प्रभावकारी विकास नीति र बलियो राजनैतिक नेतृत्व भएको फलस्वरुप नै दक्षिण कोरियाले छोटो अवधिमै एउटा महत्वपूर्ण आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रमा रुपान्तरण भएको हो । अहिले कोरियालीको प्रतिव्यक्ति आयमा २०० गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । स्टील, अटोमोवाइल्स, सेमी कन्डक्टर आदिको उत्पादनमा संसारमै उत्कृष्ट ठानिएको दक्षिण कोरियाले सूचना तथा संचार प्रविधिमा आफूलाई अब्वल सावित गरेको छ । द्रुत आर्थिक वृद्धि र विकासको यो प्रक्रियाबाट चकित भएर अहिले मानिसहरुले कोरियाको विकासप्रति लक्षित गर्दै “हान नदीको चमत्कार” पनि भन्ने गरेको पाइन्छ ।
दक्षिण कोरियाले आफ्नै प्रकारको मौलिक विकास नीति तय गरेको थियो । विकास रणनीतिका हिसाबले आर्थिक विकास र कोरियाली जनताको गरीवी घटाउन क्रमिक ९क्तभउधष्कभ० प्रयास गर्ने रणनीति कोरियाले लिएको थियो भने आफ्ना सबै संभावना र क्षमताहरुलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेको थियो । खास गरी कोरियाली सरकारले सर्वप्रथम एउटा चार चरणको विकास रणनीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरिएको थियो ।
१. राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लक्षित उद्योगको छनोट गर्दै विकास गर्ने लक्ष्य अनुरुप प्राथमिकता तय गर्दै त्यस्ता उद्योगको विकासका लागि एउटा बृहत् औद्योगिक विकास कार्यक्रम थालनी गरियो ।
२. त्यसपछि, सरकारले राष्ट्रियस्तरमै बचत गर्ने अभियान संचालन गरी जनताहरुलाई बचतका लागि प्रोत्साहित गर्दै विशिष्ट क्षेत्रहरुमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र खास गरी वैदेशिक ऋृण लिई औद्योगिक विकासको लागि बीज कोषको व्यवस्था गर्ने नीति लिइयो ।
३. “छनोट गर्ने र ध्यान केन्द्रित गर्ने” सिद्धान्तमा आधारित भएर सरकारले विभिन्न उद्योगहरु खास गरी साना तथा मझौला आकारका उद्योगलाई सक्रिय एवं रणनैतिक तवरले विभिन्न सहयोग उपलव्ध गरायो ।
४. औद्योगिक विकासको आधारको रूपमा रहेको जनशक्तिको यथोचित रुपमा विकास गर्न सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास हुनेगरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार र विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो ।
उपरोक्त चार महत्वपूर्ण कार्यहरुको थालनीबाट नै कोरियाको विकास र औद्योगिकीकरणका लागि आधार तयार भएको देखिन्छ । यसका साथै कोरियाली अर्थतन्त्रको समग्र विकासका लागि ग्रामीण विकास र भावनात्मक आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई एउटा अर्को महत्वपूर्ण पूर्वशर्त मानिएको थियो । कोरियाली सरकारद्वारा अधिकांश किसानहरु जो अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणका लागि दु्रत शहरीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट बञ्चितीकरणको पीडाबाट सापेक्षित रुपमा पीडित थिए उनीहरुलाई कोरियाको राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय रुपमा सहभागी गराउनको लागि एउटा प्रभावकारी ग्रामीण विकास रणनीति तय गरी अधिक मात्रामा कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका थिए । जसलाई “नयाँ गाउँ अभियान” को नामकरण गरिएको थियो । यसका साथै जनताको शैक्षिकस्तर उठाउन ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रूपमा शैक्षिक एवं जागरण अभियान संचालन गरिएको थियो ।
“नयाँ गाउँ अभियान” ले कोरियाको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र ग्रामीण स्तरमा रहेका जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा उक्त अभियानलाई आज पनि सफल कार्यक्रमको रुपमा लिने गरिन्छ । अझ दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण पूर्वी एशिया धेरै विकासशील मुलुकले पछि यस कार्यक्रमको अनुसरण समेत गरेको पाइन्छ ।
कोरियाली अनुभव अनुसार राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता पूरा गर्न र चुनौतीको सामना गर्न कुनै पनि राष्ट्रले भोग्नु परेको “गरिबीको दुष्चक्र” लाई तोड्नु अनिवार्य ठर्हछ । त्यसको लागि गरिबीको दुष्चक्रको नाजुक विन्दुमा प्रहार गरी नयाँ चक्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसपछि औद्योगिक विकासका लागि चरणवद्ध रणनीति तय गरी कार्य योजना अनुरुप निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ ।
कोरियाको विकासका लागि तीन महत्वपूर्ण नीतिको भूमिका रहेको पाइन्छ । जसलाई कोरियाको आर्थिक सफलताको रहस्य पनि मान्ने गरिन्छ । जस अन्तर्गत पहिलो राज्यको बलियो स्वामित्वमा विकास नीतिको कार्यान्वयन, दोश्रो प्रयासमा निरन्तरता र तेश्रो निश्चित क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नीति लिईएको थियो । कोरियाले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भन्दा वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसो गरिएकै हुँदा राष्ट्रिय उद्यमशीलताको विकास हुनुका साथै व्यावसायिक स्वामित्व राष्ट्र भित्रै रहेकोे, राष्ट्रिय पूँजीको विकास भएको र वैदेशिक लगानी संभावित बहिर्गमनको जोखिमबाट मुक्त रहेको हुँदा कोरियाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो टेवा पुगेको देखिन्छ । कोरियाली सरकारको तत्कालीन तीन महत्वपूर्ण नीति अनुरुप संचालन महत्वपूर्ण कार्यहरु निम्नानुसार रहेका थिए ।
राज्यको बलियो स्वामित्व
स्थायी शान्ति, सुशासन र आर्थिक विकासको जिम्मेवारी राज्यले लिई विकास प्रक्रियामा निम्न प्राथमिकता तय गरिएकोे थियोः
राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार वैदेशिक पूँजी सक्रिय रूपमा आकर्षित गर्ने ।
व्यावसायिक स्वामित्व रक्षाको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्दा ऋणलाई प्राथमिकता दिने ।
ठूला पूर्वाधार पर्ने उद्योगमा राज्यको लगानी
राष्ट्रको विकास क्षमता वृद्धि गर्न विभिन्न राष्ट्रिय थिंक ट्यांक संस्थाहरुको स्थापना गर्ने ।
सन् १९६२ देखि कोरियाले योजनावद्ध विकासको थालनी गरेको थियो । पहिलो पंचवर्षीय योजना देखि तेश्रो पञ्चवर्षीय योजनासम्म कोरियाले आफ्नो प्राथमिकतामा निर्यात एवं वैदेशिक पूँजी प्रवद्र्धन र तीव्र औद्योगिकीकरणलाई राखेको थियो । चौथो पञ्चवर्षीय योजनाबाट कोरियाले आफ्नो प्राथमिकता क्रम परिवर्तन गरी सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्माण गरी प्रत्येक महीना राष्ट्रपतिको अध्यक्षता छलफल गरिने परिपाटी निरन्तर १८ वर्षसम्म चलेको थियो । निर्यातसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति स्वयंले स्थलगत पहल र निर्देशन दिने परिपाटी बसालिएको थियो ।
ध्यान केन्द्रित प्रयास
कोरियाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि विभिन्न उद्योगहरुको विकास र क्षमता वृद्धि गर्न निम्न कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो ः
उद्योगलाई आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिइनु ।
उद्योगहरुको स्थापना एवं व्यावसायिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्न राज्यको प्रशासनिक क्षमतामा ध्यान दिइनु ।
उद्योगहरुलाई आवश्यक परेको बेला वैदेशिक ऋणको लागि सरकारले ग्यारेण्टी प्रदान गर्ने प्रणाली अपनाउनु ।
बजारमा ऋणको व्याजदर २० प्रतिशत हुँदा सरकारले आवश्यक उद्योगहरुलाई ५ देखि ९ प्रतिशतमा ऋण उपलव्ध गराई सहयोग प्रदान गर्नु ।
आवश्यक पूँजी तथा व्यावसायिक ऋणको लागि कोरियाले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु जस्तै कोरिया औद्योगिक बैंक, कोरिया साना तथा मझौला विकास बैंक, कोरिया कृषि विकास बैंक, आदिको स्थापना गर्नु ।
आवश्यक उद्योगहरुको लागि औचित्य एवं आवश्यकता अनुरुप ऋण मिनाहाको व्यवस्था गर्नु ।
उद्योगहरुको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न राष्ट्रिय अभियानको थालनी गर्नु ।
यसरी कोरियाले राष्ट्रिय उद्यमशीलताको विकासकोलागि नयाँ उद्यमहरुको स्थापना व्यवसाय प्रवद्र्धन, वैदेशिक कर्जा ग्यारेण्टीको व्यवस्था, औद्योगिक बैंक र एसएमइ बैंकको स्थापना गरी औद्योगिक वातावरणको निर्माण गरेको थियो । जसबाट कोरियाको औद्योगिक विकास संभव हुनगयो । कोरियाले बलियो राष्ट्रिय स्वामित्वमा आफ्ना प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिंदै आफ्नो ध्यान उद्योगहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा केन्द्रित गरी द्रुत आर्थिक विकास सफलीभूत गरेको पाइन्छ । यसका साथै कोरियाले राष्ट्रियस्तरका विभिन्नसंस्था एवं निकायहरु स्थापना गरी आफ्नो विकास क्षमतालाई सबलीकरण गर्नमा विशेष ध्यान दिएको थियो ।
नेपालको विकासमा दक्षिण कोरियाको यस अनुभवबाट महत्वपूर्ण पाठ लिन सकिन्छ । नेपालले पनि कृषिको व्यवसायीकरण संगै ग्रामीण क्षेत्रको विकास, उद्योग धन्दा तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास हुने किसिमले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माणमा लगानी गर्न तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न समेत विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । तर यी सबैको पूर्वशर्तको रूपमा राजनैतिक स्थायित्व एवं सबल राजनैतिक नेतृत्वलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय परिवेश, संभावना एवं क्षमता, उपलब्ध साधन स्रोतहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्दै आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्रलाई परिचालन गरेर आफ्नै मौलिकतामा आफ्नो आर्थिक विकासको रणनीति तय गर्नुपर्दछ । दक्षिण कोरियाको विकास अनुभवले पनि प्रत्येक मुलुकले आफ्नो देश सुहाउँदो स्वतन्त्र विकास रणनीति तय गर्नुपर्दछ भन्ने पाठ नै सिकाउँदछ । निचोडमा भन्नु पर्दा दक्षिण कोरियाको विकास अनुभवबाट सिक्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि बलियो राष्ट्रिय स्वामित्वको भावना, निरन्तर प्रयास र उद्यमशील क्षमता अनिवार्य शर्तको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्नु नै हो ।